Jamanị: Ebe ụmụnna anyị ji ihe a na-akwagharị akwagharị e dosara akwụkwọ anyị na-ezi ozi ọma n’ihu ogige ndị gbara ọsọ ndụ
Izi Ndị Gbara Ọsọ Ndụ na Ndị Kwagara n’Obodo Ọzọ Ozi Ọma
Na Jamanị, e nwere ọtụtụ ndị gbara ọsọ ndụ nakwa ndị si mba ọzọ bịa ịkpa afọ ha. Ihe a emeela ka e nwee ọtụtụ ndị na-asụ asụsụ ọzọ a ga na-ezi ozi ọma. N’ihi ya, n’ime ọnwa itoolu, e hiwere ìgwè dị iche iche na-eji asụsụ mba ọzọ amụ ihe, nakwa ebe ndị ọzọ a na-eji asụsụ mba ọzọ amụ ihe. Ha niile dị narị abụọ na iri abụọ na itoolu. E nwere ihe dị ka ebe iri atọ a na-akụzi asụsụ iri na atọ. Ihe dị ka narị ụmụnna asatọ na-amụ asụsụ ndị ahụ.
Ụmụnna anyị na-aga n’ogige ndị gbara ọsọ ndụ na-ezi ha ozi ọma. E nwere ihe karịrị narị ebe abụọ anyị na-edosa akwụkwọ anyị n’ihe a na-akwagharị akwagharị. Ụmụnna anyị na-anọ ebe ndị ahụ enyefeela akwụkwọ ruru narị puku isii na puku iri anọ.
Malite n’ọnwa Mee ruo Julaị afọ 2016, Òtù Na-achị Isi haziri ka e mee mkpọsa pụrụ iche. Ihe dị ka narị ụmụnna asaa na-asụ Arabik, si mba asaa dị iche iche gaa ebe iri n’Ọstria na Jamanị ka ha kwusaara ndị na-asụ Arabik bi ebe ndị ahụ ozi ọma.
Mkpụrụ Ego Dị n’Ụzọ
Na Beliiz, e nwere ndị nkwusa iri ise n’ọgbakọ Faber Road Kriol. Ha na-ejikarị ụkwụ aga ozi ọma. Ọtụtụ n’ime ha enweghị ego ma ha na-achọ otú ha ga-esi enye onyinye. Afọ ole na ole gara aga, ụmụnna ahụ bidoro tụtụwa mkpụrụ ego ha hụrụ n’okporo ụzọ bụ́ uzuzu uzuzu mgbe ha na-ekwusa ozi ọma. Ọ na-abụ afọ gwụ, ha abịakọta ọnụ saa ego ndị ahụ, tụfuo ndị na-adịghị mma, ma gụọ ndị dị mma.
Ọnụ ego ọtụtụ n’ime mkpụrụ ego ndị ahụ anaghị ebu ibu. Ma n’afọ ọ bụla, ha gụkọta ego ole ha tụtụkọtara, ọ na-eru ihe dị ka puku naịra iri asaa na otu. Ụmụnna ndị a na-eji ọkara ego ahụ nye aka maka ihe ndị a na-emefu n’Ụlọ Nzukọ Alaeze ha, ma jiri ọkara nke fọrọ afọ nye onyinye maka ọrụ zuru ụwa ọnụ.
Nde Mmadụ Anọ Gere Ya
Otu n’ime ihe Ndịàmà Jehova nọ na Burundi na-agaghị echefu echefu kemgbe ha malitere n’obodo ahụ mere n’abalị ise n’ọnwa Mach afọ 2016. N’ụbọchị ahụ, Nwanna Anthony Griffin, onye na-anọchi anya isi ụlọ ọrụ anyị bịara leta alaka ụlọ ọrụ anyị dị na Burundi. E tinyere ihe omume niile e mere n’ụbọchị ahụ na redio obodo ahụ, ndị mmadụ anọrọ ebe dị iche iche gee ya. Ihe dị ka nde mmadụ anọ gere ya.
Ihe omume ahụ e mere na redio mere ka ọtụtụ ndị nụ ozi ọma, ha kwukwara okwu ọma banyere ya. Otu n’ime ndị pịịrị anyị aka n’ígwè n’ụlọ ọrụ redio ahụ kwuru, sị: “Anyị chọrọ ka unu na-eme ụdị ihe omume a na redio.” Onye ọzọ na-arụ n’ụlọ ọrụ ahụ kwukwara, sị: “Biko, na-emenụ [ụdị ihe omume a] n’ihi na ọ ga-azọ ọtụtụ ndị ndụ.” Ọtụtụ ndị na-anya bọs na tagzi nọ na-ege ihe omume ahụ n’ụgbọala ha.
Egwú Ahụ Kwụsịrị
N’ụbọchị bọtara ụbọchị e mere Ncheta Ọnwụ Jizọs n’afọ 2016, obi adịghị ụmụnna nọ n’obere ìgwè dị n’ebe dịpụrụ adịpụ n’obodo Nepal mma. Ihe kpatara ya bụ na ha nụrụ na n’ụbọchị a ga-echeta Ọnwụ Jizọs, e nwere ndị chọrọ ịnọ n’ụlọ akwụkwọ dị nso n’ebe ha chọrọ ịnọ eme ya, kụọ egwú.
A kụwa ụdị egwú a, ọ na-adasi ụda ike. N’ụtụtụ ụbọchị ahụ a ga-eme Ncheta Ọnwụ Jizọs, otu n’ime ndị na-ahazi egwú ahụ bịara gwa ụmụnna okwu ebe ha nọ na-edozi ebe ha ga-anọ eme ya. Ọ gwara ha, sị: “Egwú anyị ga-akụ agaghị ekwe unu nụ otu mkpụrụ ihe.”
Egwú ahụ malitere n’elekere anya iri na abụọ nke ehihie. Ọ dasiwakwara ụda ike otú ahụ nwoke ahụ kwuru. N’ihi ya, ụmụnna anyị tinyere ígwè okwu na-adasi ụda ike karịa nke ha chọburu itinye. N’agbanyeghị ya, egwú ahụ dasiri ụda ike nke na mgbe ha na-ele ma ígwè okwu ahụ ọ̀ na-arụkwa ọrụ nke ọma, e nweghị ihe ọ bụla ha nụrụ. Ihe a gwụrụ ụmụnna anyị ike, ma ha kpesiri ekpere ike gbasara ya. Ma, ka ọtụtụ ụmụnna na-abịarute n’ebe a ga-eme Ncheta Ọnwụ Jizọs mgbe ọ fọrọ nkeji iri atọ ka o bido, egwú ahụ kwụsịrị n’ike. Ụfọdụ ndị bịara egwú ahụ bidoro ịlụ ọgụ mgbe ha ṅụgbuchara onwe ha ná mmanya, ndị uwe ojii abịa kwụsị egwú ahụ. O meziri ka ebe niile daa jụụ, ụmụnna emee Ncheta Ọnwụ Jizọs n’udo.
Okwu Ọma E Kwuru Banyere jw.org
E nwere otu onye ọsụ ụzọ aha ya bụ Giuseppe. O bi na Ịtali. Ọ na-esi n’ụlọ ya arụrụ otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe ndị gbasara Ịntanet ọrụ. N’ọnwa Mee gara aga, ya na ndị ọrụ ibe ya dị ihe dị ka mmadụ iri asaa so nwee nnọkọ. Ihe mere ha ji nwee nnọkọ ahụ bụ ka ha kwurịta ihe ọhụrụ ndị ha nwere ike ime ka ọrụ ha kakwuo mma. Ọga kpata kpata n’ụlọ ọrụ ahụ kwuru ka ha lee ebe ụlọ ọrụ ụfọdụ na-edebe ihe n’Ịntanet ka ha hụ otú ha nwere ike isi mee ka nke ha kakwuo mma. O jizi kọmputa ha gosi ha isimbido nke ebe otu ụlọ ọrụ na-edebe ihe n’Ịntanet. O juru Nwanna Giuseppe anya mgbe ọ hụrụ na ọ bụ isimbido nke jw.org ka e gosiri ha. Ọga kpata kpata ahụ kwuru, sị, “E nweghị ebe a na-edebe ihe n’Ịntanet ka nke a mma.” Ọ malitere ikwu banyere otú e si hazie jw.org na otú o si arụ ọrụ. O kwuru okwu ọma banyere ọmarịcha foto ndị na-adị na ya, nakwa otú e si hazie ya ka ọ dịrị mmadụ mfe ịchọta ihe na ya.
Nwanna Giuseppe kwuru, sị: “O juru ndị ọrụ anyị anya mgbe a gwara ha asụsụ ole jw.org dị na ya. Mgbe anyị nwechara nnọkọ ahụ, onyeisi ụlọ ọrụ anyị gwara ọga kpata kpata anyị na ndị ọrụ anyị, sị: ‘Giuseppe bụ Onyeàmà Jehova.’ Mgbe o kwuchara ihe a, ọga kpata kpata anyị gwara m, sị: ‘E kwesịrị ịja ndị chọọchị unu mma. Otú unu si hazie ebe unu na-edebe ihe n’Ịntanet amaka. Ụlọ ọrụ ma ọ bụ òtù ọ bụla nwere ebe ha na-edebe ihe n’Ịntanet ga-achọ ka nke ha dị ka nke unu. M nọ na-eche oge ọ na-ewe unu iji na-etinye ihe ọhụrụ ma na-eme ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịchọta ihe na ya. M na-echekwa oge ọ na-ewe unu iji leruo ihe ndị na-adị na ya anya iji hụ na ọ dị otú o kwesịrị.’ O juru m anya otú ha si na-eto m n’ihe m na-emeghị. Ma, obi dị m ụtọ na o mere ka ọtụtụ ndị na-amaghị banyere Ndịàmà Jehova mata ndị ha bụ. Ugbu a, mụ na ụfọdụ ndị ọrụ anyị na-ekwurịta banyere Baịbụl. M na-amụkwara mmadụ atọ n’ime ha Baịbụl.” Ụlọ ọrụ ahụ ka na eleba anya n’otú e si hazie jw.org. Nwanna Giuseppe na ndị ọrụ ha ka na-ekwurịtakwa gbasara Baịbụl.
Ọ Hapụrụ Bọl Ọ Na-agba
Ajentina: Ebe Jorge na ụmụnna nọ na-agba bọl
N’Ajentina, e nwere otu onye na-eto eto aha ya bụ Jorge. Na mmalite afọ 2010, nwa klas ha ziri ya ozi ọma. Nke a bụ nke mbụ Onyeàmà Jehova na-ezi ya ozi ọma. O mechara malite ịmụ akwụkwọ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? N’oge ahụ, ọ na-agba bọl, ọ na-agbakwa ya nke ọma. O mechakwara sonyere òtù ndị na-eto eto nke otu òtù egwuregwu bọl a ma ama n’obodo ha. N’ọnwa Eprel afọ 2014, otu òtù egwuregwu bọl na Jamanị kpọrọ ya ka ọ bịa gbawara ha bọl. Obi tọrọ ya ezigbo ụtọ na ọ na-aga ịgba bọl ná mba ọzọ. O kwetakwara ịga. Mgbe ọ fọrọ abalị ole na ole tupu ya agawa, onye na-akụziri ha bọl gwara ya, sị: “Ọ̀ kwa ị bụ Onyeàmà Jehova? Ịga ebe ahụ agaghị abara gị uru. Mgbe m na-etolite ka gị, abụ m Onyeàmà Jehova. Otu òtù egwuregwu bọl n’Eshia kpọrọ m ka m bịa gbawara ha bọl. Ha kwere m nkwa imere m elu na ala. Ihe a ha gwara m mere ka obi tọọ m ezigbo ụtọ. Mụ na ezinụlọ m kwagara ebe ahụ, ma ihe anyị hụrụ abụghị ihe anyị tụrụ anya ya.” Jorge kwuru, sị: “Ihe ahụ o kwuru ruru m n’ahụ́, mụ ekpebie na agaghị m agazi. N’afọ 2015, aghọrọ m onye nkwusa, mechaakwa mee baptizim.”
O Nwetara Ezigbo Ngọzi n’Akwụghị Ụgwọ Ọ Bụla
N’ọnwa Septemba afọ 2015, Ndịàmà Jehova mere mgbakọ ukwu ha na Kampala dị na Uganda. Isiokwu mgbakọ ahụ bụ “Ṅomie Jizọs.” Obi tọrọ ndị bịara ya ezigbo ụtọ mgbe Nwanna Mark Sanderson, onye so n’Òtù Na-achị Isi wepụtara Baịbụl Nsọ​—⁠Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ n’asụsụ Luganda.
Otu nwaanyị a na-amụrụ Baịbụl kwuru, sị: “Obi tọrọ m ezigbo ụtọ inweta ọmarịcha Baịbụl a. N’oge ahụ, ndị chọọchị anyị na-ejikere maka ọbịbịa poopu. Ha rere chaplet ha ‘gọziri agọzi’ iji nweta ego. Ihe ha rere otu bụ ihe dị ka puku naịra isii. Ọtụtụ ndị chọrọ inweta chaplet a ma ha enweghị ego ha ga-eji azụ ya. Ma, mgbe m gara mgbakọ Ndịàmà Jehova, enwetara m ezigbo ngọzi n’akwụghị ụgwọ ọ bụla. E nyere ndị niile bịara mgbakọ ahụ Baịbụl ma hapụ onye ọ bụla chọrọ inye onyinye ka o nye ihe si ya n’obi. Ọ bụ Jehova nyere anyị ya. N’ụbọchị ọ bụla, ka m na-agụ Okwu Chineke n’asụsụ anyị ma na-amatakwu Chineke nke ọma, m na-ahụ n’eziokwu na Jehova agọziela m. M na-ekele Jehova maka Baịbụl a o nyere m.”
A Na-ebi Akwụkwọ Ha n’Ala Mmụọ
Ndị isi chọọchị ụfọdụ nọ na Kongo (Kinshasa) gbalịrị ime ka ndị chọọchị ha kwụsị ịna-aga ebe anyị na-edebe ihe n’Ịntanet bụ́ www.jw.org. Ha gwara ha na akara bụ́ “www” na-egosi na a na-ebi akwụkwọ anyị n’ala mmụọ. Ha kwuru na akara a na-anọchi anya akara nwa anụ ọhịa ahụ, ya bụ, 666 e kwuru okwu ya ná Mkpughe. (Mkpu. 13:18) Ihe a ha kwuru mere ka ụfọdụ ndị a na-amụrụ Baịbụl kwụsị ịmụ ihe.
Mgbe otu di na nwunye bụ́ ndị ọsụ ụzọ kpechara ekpere banyere okwu a, ha kpọrọ ndị ha na-amụrụ Baịbụl ka ha na di ha ma ọ bụ nwunye ha bịa n’ụlọ ha. Di na nwunye atọ bịakwara. Mgbe ha richara nri, ha gosiri ha vidio anyị aha ya bụ Ndịàmà Jehova​—⁠Ndị A Haziri Ikwusa Ozi Ọma. Mgbe ha lechara vidio a, ha chọpụtara na ihe ahụ a gwara ha banyere ebe a na-ebi akwụkwọ anyị abụghị eziokwu. N’izu ọzọ ya, di otu n’ime ụmụ nwaanyị ndị a a na-amụrụ Baịbụl nyere Nwanna nwoke ahụ na nwunye ya ihe dị ka puku naịra iri atọ ka e jiri ya kwado ọrụ zuru ụwa ọnụ. O nyere onyinye a n’agbanyeghị na ọ malitebeghị ịmụ Baịbụl.
Ịmụ Abụ Ọhụrụ
Ụmụnna anyị nọ n’otu ime ime obodo dị na Papụa Niu Gini chọsiri ike ịmụ abụ Alaeze ndị ọhụrụ. Ma, e nweghị Ịntanet n’obodo ha. N’ihi ya, ọgbakọ e nwere na Mundip na-eziga otu nwanna n’obodo kacha ha nso e nwere Ịntanet na ya. Nwanna a ga-aga ije awa abụọ tupu ya erute ebe ọ ga-agba ụgbọala ga-ewekwa ya awa abụọ iji garuo. Ya rute, ya agaa na jw.org jiri akwụkwọ dere abụ ọhụrụ e wepụtara ma laghachi n’obodo ya. Ya ruo n’Ụlọ Nzukọ Alaeze, ya edee abụ ahụ na bọọdụ. Ya dechaa, ụmụnna edere ya maka ọmụmụ ihe. Obi na-atọ ha ezigbo ụtọ isoro ụmụnna ha n’ụwa niile jiri abụ ọhụrụ ndị a na-efe Jehova otu mgbe.